'Sequía' नयाँ TVE श्रृंखला चर्चित अनुहारहरू | बेजिया
'Sequía' नयाँ TVE श्रृंखला चर्चित अनुहारहरूको साथ हो
सुसाना Godoy | 01/06/2021 14:00 | समाचार
'सूखा' TVE मा पहिले नै एक तथ्य हो। यस अवस्थामा, यो प्लेटफर्म होइन, जसको हामी सामान्यतया कुरा गर्छौं, जसले हामीलाई रोचक समाचारहरू प्रस्तुत गर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि सामान्य च्यानलहरू पनि फिक्शनमा शर्त लगाउँछन् र यस अवस्थामा प्रख्यात र स्पेनिश कलाकारहरूको हातबाट।
के लाग्छ यो एक राम्रो स्वागत छ र सबै भन्दा माथि, यसको तर्क को लागी कि यो पक्कै पहिले कहिल्यै प्रभाव गर्दैन। यो एक थ्रिलर हो, त्यसैले रहस्य हाम्रो पक्षमा हुनेछ तर अधिक विषयवस्तुहरू यसमा थप गरिनेछ जुन हामी सँधै पत्ता लगाउन चाहन्छौं। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
1 'सूखा' को कथानक के हो
2 स्थानहरू जुन हामी श्रृंखलामा हेर्नेछौं
3 शृंखलामा के पात्रहरू छन्?
'सूखा' को कथानक के हो
पोर्तुगाली टेलिभिजनको सहकार्यमा हामी यो नयाँ TVE श्रृंखलामा के फेला पार्न सक्छौं भन्ने जानेर हामी सुरू गर्दछौं। ठिक छ, हामी अगाडि बढ्यौं, यो एक थ्रिलर हो कि एउटा सहरमा एक महान अनसुलझे रहस्यको साथ सुरू हुन्छ। यस ठाउँले देखेको छ कि खडेरीले कसरी त्यसमा प्रवेश गर्यो। तर उनको कारण बन्दुकको चोटको साथ दुईवटा लाशहरू छन् जुन त्यहाँ लामो समयदेखि भइरहेको थियो। त्यसबेलादेखि पुलिस यो अपराध समाधान गर्न कोशिस गर्दैछ।
जब पीडितको पहिचान थाहा हुन्छ, दुई परिवारले पथ पार गर्छन् जबकि तिनीहरू एकै ठाउँका छैनन्। तर यसले असंख्य रहस्य र गोप्य सम्बन्धहरू देखा पर्न दिनेछ। तर यो पनि छ हामी धोका, प्रेम र धेरै महत्वाकांक्षा खोज्दछौं। मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा, हामीसँग पहिले नै भएको सबै कुराको सारांश छ जुन 'सूखा' बनाउने नयाँ श्रृ series्खला मध्ये एक बनाउँछ जुन तपाईं अ on्कित गर्न लाग्नुहुनेछ, निश्चित रूपमा। अहिलेको लागि, फिलिम सुरू हुँदैछ, त्यसैले हामी केहि बेर पर्खनु पर्छ।
स्थानहरू जुन हामी श्रृंखलामा हेर्नेछौं
निश्चित रूपमा केहि फिलिमिंग स्थानहरू तपाइँलाई धेरै परिचित हुनेछन्, किनभने यो भनिन्छ यो रेकर्डि। Caceres को क्षेत्र मा शुरू हुनेछ, साथै माद्रिद मा। तर हामीले अघि नै उल्लेख गर्यौं कि यो पोर्तुगाली टेलिभिजनको सह-निर्माण हो, यो भन्नु पर्दछ कि लिस्बन वा कास्काइसका क्षेत्रहरू पनि मुख्य शटहरू हुनेछन्, भेरटेलले देखाए जस्तै! त्यसोभए, यी डाटालाई मात्र थाहा पाएपछि, हामी बुझ्छौं कि यसले धेरै फाइदा गर्छ, किनकि स्थानहरूमा पनि ठूलो आकर्षण छ र तर्कमा थपिएको त्यो आफैंमा धेरै कुरा भन्न सक्दछ।
शृंखलामा के पात्रहरू छन्?
एकातिर हामी फेला पार्दछौं रोडोल्फो सान्चो, जसलाई हामी सबैले 'क्लास छोड्दा' जस्ता शृ started्खलामा शुरू गरेको हो भनेर जान्दछौं र धेरै जसो 'अप्ठ्यारो समयमा प्रेम', 'इजाबेल' वा 'समयको मन्त्रालय' जस्ता अरूमा बढ्दैछन्। उनको पछाडि अभिनेत्री हुनुहुन्छ एलेना रिवेरा हामीले उनलाई 'सर्व्हर वा प्रोटेक्टे', 'ला ट्रुथ' वा 'इन डेल अल्मा मिया' मा देख्यौं। मिर्याम ग्यालगो TVE शृ of्खलाको नायकहरूका बीचमा पनि आउने अर्को नाम हो। दुबै 'पत्रकार' र 'रेड ईगल' वा 'राज्य रहस्य' सँग पनि यो थियो।
त्यसोभए हामी देख्छौं कि मुख्य कास्ट महान ताराले भरिएको छ, बिर्सनु हुँदैन मिगुएल एन्जिल मुओज कि हामी उनलाई अरूसँग 'एक कदम अगाडि' वा 'युलिसिस सिन्ड्रोम' बाट सम्झन्छौं। उसको पक्षमा हामी जुआन Gea पनि देख्नेछौं, जसले टेलिभिजन र सिनेमा जगतमा र चलचित्रको संसारमा पनि धेरै कामहरू गर्दै आएका छन्। पोर्तुगाली अभिनेत्री मार्गारीता मारिन्हो र अभिनेता गुइलहर्म फिलिप तिनीहरू पनि कास्टमा सम्मिलित हुन्छन्। जसरी यसको फिलिमि now अब गर्मीको सुरूवातमा सुरू हुन्छ, अहिले यस श्रृंखलामा कुनै डाटा छैन। तर हामी आशावादी छौं कि हामी छिट्टै सानो पर्दामा यी सबै अभिनेता र अभिनेत्रीहरूको आनन्द लिन सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » 'Sequía' नयाँ TVE श्रृंखला चर्चित अनुहारहरूको साथ हो